कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डाहरु Bizshala -
काठमाण्डौ । कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो असार २५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा वीरगन्जस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा बिहान ७ः३५ बजेबाट सुरु हुनेछ।
सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक सम्पूर्ण क्रियाकलाप गर्न गराउन सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियार दिने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन हुनेछ।
सोही सभाले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तारसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनबमोजिम ‘ख’ वर्गको विकास बैंकको कार्यक्षेत्र न्यूनतम जोडिएका ५ जिल्ला हुनु पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। जसअनुसार बैंकले प्रदेशमा परेको मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोक हटाई पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ।
सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक, आर्थिकलगायतका महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरु पनि छलफल गरी अनुमोदन गर्नेछ।
corporate development Bank Limited AGM
कामना सेवा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा कात्तिक २३ मा, बुक
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो १५ वार्षिक साधारणसभा...
दसैँको फूलपाती, अष्टमी र नवमीमा मुक्तिनाथ विकास बैंकका १०
काठमाण्डौ । ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी मुक्तिनाथ विकास...
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका तथा...
आईपीओ निष्कासन गर्दै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, बिक्री
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ कृषि...
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा सर्वसाधारण सेयरधनीका...
सिन्धु विकास बैंकको कामु सीईओको जिम्मेवारी रामकुमार गिरीलाई
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंकको सीईओ पदबाट रमेशप्रसाद जोशीले...
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयर कति ?
काठमाण्डौ । कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/८८ का लागि...
एक सातामै विकास बैंकहरुबाट रु. ५.३९ अर्ब कर्जा लगानी, निक्षेपको
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको...